Faa'iidooyinka kuleylka kuleylka, Qalabka kuleylka ee DaWeeyska Daewe
waa maxay faa'iidooyinka kuleylka kuleylka, xayawaan, adkeyn, boodh iyo foorno, iwm?
Sababta dooro kuleylka kuleylka Taasna waa mid kooban oo ku saabsan faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee casriga casriga ee casriga ah ee casriga ah ee loogu talagalay soosaarka caanaha:
* Qalabka kuleylka
Kuleylka induction waxaa lagu dhex kiciyaa qaybta lafteeda iyada oo lagu beddelayo korantada korantada. Natiijo ahaan, badeecada wax soo saaraysa, dhalanrog iyo qiimayaasha la diiday ayaa la yareeyay. Tayada wax soo saarka ugu badan, qaybta waxaa lagu go'doomin karaa qol ku lifaaqan faaruqin, firfircoonida ama yareynta jawiga si looga takhaluso saameynta oksaydhka. Heerarka wax soo saarka waa la kordhin karaa maxaa yeelay induction si dhakhso leh ayey u shaqeysaa; kuleylka ayaa si toos ah oo dhakhso leh loogu horumariyaa (> 2000º F. gudaha <1 ilbidhiqsi) gudaha qaybta. Bilowgu waa mid deg deg ah; looma baahna diirimaad ama qabow wareeg ah. Nidaamka kuleylka kuleylka waxaa lagu dhammaystiri karaa sagxadda wax soosaarka, oo ku xigta mashiinka sameynta qabow ama kulul, halkii loogu diri lahaa qaybo qaybo ah foornada fog ama qandaraasle. Tusaale ahaan, geedi socodka xaraashka ama iibinta ee horey u baahday waqti qaadasho, habka kuleylka dufanka khadka ka baxsan ayaa hadda lagu beddeli karaa nidaam soosaar socod hal-gabal oo isdaba-joog ah.
* Is-beddelka kuleylka
Kuleylka kuleylka ayaa meesha ka saaraya isweydaarsiyada iyo arrimaha tayada la xidhiidha
oo leh dabka furan, kululaynta kuleylka iyo hababka kale. Marka nidaamka si habboon loo hagaajiyo oo loo dhiso, ma jirto shaqo maleyn ama isbeddel; qaabka kuleylka waa mid lagu celin karo oo joogto ah. Iyada oo hababka casriga ah ee xoogga leh, xakamaynta saxda ah ee saxda ah waxay bixisaa natiijooyin isku mid ah Awoodda ayaa si dhakhso ah loogu soo rogi karaa ama xiran karaa. Iyada oo la xakameynayo xakamaynta heerkulka wareegyada, horumarsan nidaamyada kuleylka kuleylka leeyihiin awood aad ku cabirto heerkulka qayb kasta oo shaqsi ah. Heerarka gaarka ah ee kor u qaadista, qabashada iyo hoos udhaca hoos ayaa la dejin karaa & xogta waa la duubi karaa qayb kasta oo la wado.
* Kuleylka Nadiifinta
Nidaamyada kuleylka kuleylaha ha gubin shidaal dhaqameed dhaqameed; soocid waa nidaam nadiif ah, aan lahayn hawo wasakhaysan kaas oo kaa caawin doona ilaalinta deegaanka. Nidaamka isdaba-gelinta wuxuu hagaajiyaa xaaladaha shaqada ee shaqaalahaaga adoo ka takhalusaya qiiqa, kuleylka qashinka, qulqulka qashinka iyo dhawaaqa qaylada. Kuleylku waa amaan oo hufan oo aan lahayn alaab furan oo khatar gelin karta hawlwadeenada ama qarsoodi ah geeddi-socodka. Qalabka aan dabiiciga ahayni ma saameyn waxayna ku dhici kartaa meel u dhaw goobta aagga kululaynta iyada oo aan waxyeello lahayn.
* Kaydso tamarta
Burburin biilasha korantada? Nidaamkani waxa uu ku salaysan yahay tamarta tamarta-roganaysa ilaa 90% tamarta korontada loo isticmaalo kuleylka faa'idada leh; Foornooyinka baakidhka waa guud ahaan 45% kaliya tamarta-hufan. Tan iyo marka loo baahdo indho-furid la'aan ma jiro wareegto diirran ama qabow-qabow, luminta kuleylka ayaa hoos loo dhigaa ugu yaraan. Dib-u-celinta iyo joogtaynta nidaamka is-af-duubku wuxuu si aad ah ugu habboon yahay nidaamyada tamarta ee tamarta ah.
faa'iidooyinka kuleylka kuleylka